Addunyaa irratti lakkoofsi namoota Covid-19 du’anii miiliyoona caale - NuuralHudaa
Addunyaa irratti lakkoofsi namoota Covid-19 du’anii miiliyoona caale
Dhibeen daddarbaan ji’a 10 dura Chaayinaa kutaa Wuhaan keessatti argamun labsame, hardha guutuu Addunyaa waliin gahee, lubbuu nama miiliyoona tokko ol gaalafatuu gabaafame.
Namoota miliyoona tokko ol kan dhibee kanaan lubbuun dabre jidduu wallakaan lammilee biyyoota sadii Ameerikaa, Indiyaa fi Biraaziil yoo tahan, Ameerikaan lakkofa namoota du’anii gara 210,102 qabachuun dursaa jirti, Biraazil keessatti ammoo namooti 142,161 fi Indiyaa keessatti namoota 96,854 ta’an dhibee kanaan du’e.
Gabaasi Yunivarsitii Joons Hopkins akka agarsiisutti, guutuu Addunyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii Walumaagalatti 33,683,835 dabruu, ammaas Ameerikaan lakkoobsa namoota qabamanii 7,373,784 qabachuun jalqaba irratti, Akkasumas Indiyaan 6,193,966 fi Biraaziil 4,748,327 qabachuun lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu.
Xaaliyaaniitti namoota dhibee COVID_19 qabaman jidduu walumaagalatti 11.6% , Ingiliiziitti immoo 9% dhibee kanaan du’u. Akkasumas ardii Afrikaatti immoo Itoophiyaatti namoota qabaman jidduu 1.6%, Naayijeeriyaatti 1.9%, Afrikaa kibbaatti immoo 2.4 dhibee kanaan du’u odeeyfannoon ni addeessa.
September 22, 2021 sa;aa 6:20 am Update tahe